Beeline | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
MTS မှ beeline ရန်အော်ပရေတာကိုပဌနာကိုဘယ်လို
mts 8-800-700-06-11 မှ beeline operator ကိုမည်သို့ခေါ်ရမည်နည်း - ဤဖုန်းနံပါတ်သည်နေ့ရောညပါအချိန်မရွေးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုလက်ခံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ခေါ်ဆိုမှုသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ...
ကာဇက်စတန်အတွက် Beeline အော်ပရေတာနှင့်အတူဆက်သွယ်ဘယ်လိုနေသလဲ? အဆိုပါ 0611 မလိုချင်သောပစ္စည်းကို atomatich.sluzhbe ။
ကာဇက်စတန်ရှိ Beeline အော်ပရေတာကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။ အလိုအလျောက် ၀ န်ဆောင်မှု 0611 တွင်လိုအပ်သောပစ္စည်းမရှိပါ။ တပ်မက်လိုချင်သောအရာရှိ၏။ အချက် ၂ - လူအုပ်စု။ ဆက်သွယ်မှုယေဘုယျအားဖြင့်2ကိုခေါ်ဆိုသောအခါ - ပထမဆုံးခေါ်ဆိုရမည့်အရာ ...
ဘယ်လိုပိတ်ဆို့နေလျှင်, Beeline ၏နံပါတ် restore မှလပေါင်းများစွာပြီးနောက် SIM ကဒ်ကိုမသုံးခဲ့တာလဲ
ဘယ်လိုပိတ်ဆို့နေလျှင်, Beeline ၏နံပါတ် restore မှလပေါင်းများစွာပြီးနောက် SIM ကဒ်ကိုမသုံးခဲ့တာလဲ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] အမှန်တကယ်ခိုးယူထားသောနံပါတ်ကိုထုတ်ယူ သူမထံစာရေးရန်ကြိုးစားပါ။ အလက်ဇန်းဒါး၊ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ! ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်အခန်းကိုပြန်လည်ထားရန် ...
သည်အခြားအော်ပရေတာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဖုန်းကို "Beeline" A-100 သော့ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အခြားအော်ပရေတာများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန် Beeline A-100 ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်နည်း။ ငါအလုပ်မလုပ်ဘူးနဲ့ငါကြေညာချက်ရေးသားခဲ့သည်သုည, ကိုယ့်ဖုန်းကိုထုတ်လုပ်သူမှလှည့်, သူတို့ကငါ့ကိုကုဒ်ပို့နှင့် chudo အကြောင်းကို ...
ကြောင်းကြိုးအင်တာနက်နည်းပညာ FTTB ပါသလဲ
FTTB ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကရေးသားကြခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ မှစတင်၍ Volga-Telecom မှပံ့ပိုးပေးသည့်ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနေသည်။ "နောက်ထပ်အပို" အခွန်; ၉၅၀ ရူဘယ်အတွက်
ဂဏန်းကနေခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS တစ် printout ရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အင်တာနက်မှတဆင့်ထိုသို့ပြုမှဖြစ်နိုင်ပါသလား?
နံပါတ်မှခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS များအားလုံးအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ယူနည်း။ အင်တာနက်မှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ သင်အသေးစိတ်မှာကြားရန်လိုသည် ရုံးမှာ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက် (www.beeline.ru) "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်"၊ "ဘဏ္informationာရေးသတင်းအချက်အလက်" အပိုင်းရှိ။ gt; I_) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည် ...
အဘယ်သို့ငါအကောင့်ထဲမှာတည်သည်ငွေဘယ်လောက်တွေ့မြင်နိုင်သလဲ ကျွန်မအိမ်မှာအင်တာနက် Beeline ရှိသည်,
အကောင့်ထဲမှာပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကျန်သလဲဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းငါအိမ်မှာအင်တာနက်လိုင်း၊ လက်ကျန်ငွေကိုသင်၏ Personal Account တွင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ မင်္ဂလာပါ။ နေအိမ်၏ဟန်ချက်ကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
"Blacklist" အော်ပရေတာ Beeline ဝန်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။
"Blacklist" အော်ပရေတာဝန်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။ ဖော်ပြချက် - Black List ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ သင်မလိုလားအပ်သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းသူများကိုသူတို့၏ခေါ်ဆိုမှုများကိုပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူကာကွယ်နိုင်သည်။ မင်းကိုခေါ်ပြီး ...
အိမ်မှအင်တာနက်ကိုဖုန်းမှမည်ကဲ့သို့ပေးရမည်နည်း။ သင်၏ဖုန်းငွေတောင်းခံမှုကိုဘဏ်ကဒ်ငွေပေးချေမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲပါ။ မိုဘိုင်းကဒ်ဖြင့်သင့်တွင်ပိုက်ဆံအိတ်မရှိသည့်တိုင်၊ စတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင် ၀ ယ်ယူမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Beeline မှ megaphone သို့ငွေမည်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်မည်နည်း moronic beeline အခြားဖုန်းသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသင်၏ Beeline မိုဘိုင်းဖုန်းအကောင့်မှငွေလွှဲခြင်းကိုမိုဘိုင်းအော်ပရေတာများ၏သုံးစွဲသူများ၏အကောင့်များသို့ ...
beeline အော်ပရေတာကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ။ သူတို့ကအဲဒီလိုရိုက်ကူးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အကယ်လို့သင်အင်တာနက်ပေါ်မှာထိုင်နေလျှင်သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပြီးပေးဆောင်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကိုမှာယူမယ်ဆိုရင်အော်ပရေတာကဒီမှာကူညီလိမ့်မယ်သေချာတယ် ...
အဆိုပါ Beeline အပေါ်ကတိထားရာငွေပေးချေမှုယူနည်း။
ကတိထားရှိငွေပေးချေမှုကို Beeline တွင်မည်သို့ယူရမည်နည်း။ နှင့်ဤမျှကာလပတ်လုံး sms များအတွက်သင်္ဘောသဖန်းသွားပါ ??? သူတို့ကအကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကိုခေါ်ခဲ့တယ်၊ beeline …။ အဲဒါတစ်ခုခုပါ။ ပိုက်ဆံဘယ်လိုသာသိတယ် ...
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,790 စက္ကန့်ကျော် Generate ။